အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ရင်ကွဲမတက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတဲ့ အကြောင်း ယူကြုံးမရစွာ ပြောပြ လာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး – GaMone Media
အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် ရင်ကွဲမတက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတဲ့ အကြောင်း ယူကြုံးမရစွာ ပြောပြ လာတဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
ပရိသတ်ကြီးရေ.. နန်းဆုလို့အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုရတီစိုးကတော့ ယောကျ်ားလေးမိန်းကလေးမရွေး အားလုံးချစ်ခင်ကြပြီး အနုပညာလောကမှာထိပ်တန်းကနေ အောင်မြင်နေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ နန်းဆုလေးကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အားလုံးနဲ့ အတူရပ်တည်ကာ လှုပ်ရှားမှု တွေပြုလုပ်နေပြီး ပြည်သူပရိသတ်တွေ တွေ့ကြုံခံစားနေရတာတွေအပေါ်မှာလည်း ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ နေပါတယ်နော်..။ လမ်းပေါ်ထွက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့အပြင် လှူဒါန်းမှုတွေကိုပါ ပြုလုပ်နေတဲ့ နန်းဆုလေး တစ်ယောက် ဒီကနေ့လေးမှာတော့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ ပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းယူကြုံးမရစွာ စကားလေးဆိုလာပါတယ်နော်..။
အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို လက်နက်အားကိုးနဲ့ အနိုင် ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ကြဖို့ပြောရင်း သူမအနေနဲ့လည်း ရင်ကွဲမတတ်ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်း နန်းဆုလေးက ယူကြုံးမရစွာပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ “ရင်ကွဲမတတ် ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ် 😓 တော်ပါတော့ လက်နက်မဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ ပြည်သူတွေပါရှင်
လက်နက်အားကိုးနဲ့ မတရားအနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတာတွေ တော်ကြာ ပါတော့ရှင်🙏🙏🙏🙏 အာဏာရှင်စနစ် မုချကျဆုံးပါစေ HowManyDeadBodyNeedForUNtoTakeAction. .” ဆိုပြီး နန်းဆုလေးက စိတ်မကောင်းစွာ ရေးသားထားတာပါ..။ ပြည်သူပရိသတ်တွေအားလုံး ကလည်း နန်းဆုလေးနဲ့အတူ ထပ်တူ ခံစားနေရပြီး မချိတင်ကဲဖြစ်ကြရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို Comment လေးတွေမှာ အသီးသီးရေးသားထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်..။
ပရိသတ္ႀကီးေရ.. နန္းဆုလို႔အားလုံးက ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကတဲ့ အဆိုေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေခ်ာေလး နန္းဆုရတီစိုးကေတာ့ ေယာက်္ားေလးမိန္းကေလးမေ႐ြး အားလုံးခ်စ္ခင္ၾကၿပီး အႏုပညာေလာကမွာထိပ္တန္းကေန ေအာင္ျမင္ေနသူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။ နန္းဆုေလးကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားလုံးနဲ႔ အတူရပ္တည္ကာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြျပဳလုပ္ေနၿပီး ျပည္သူပရိသတ္ေတြ ေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရတာေတြအေပၚမွာလည္း ဝမ္းနည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္လို႔ ေနပါတယ္ေနာ္..။ လမ္းေပၚထြက္လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့အျပင္ လႉဒါန္းမႈေတြကိုပါ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ နန္းဆုေလး တစ္ေယာက္ ဒီကေန႔ေလးမွာေတာ့ သူမရဲ႕လူမႈကြန္ယက္ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာကေန ျပည္သူေတြအတြက္ဝမ္းနည္းယူႀကဳံးမရစြာ စကားေလးဆိုလာပါတယ္ေနာ္..။
အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို လက္နက္အားကိုးနဲ႔ အႏိုင္ က်င့္သတ္ျဖတ္ေနတာေတြကိုရပ္တန႔္ၾကဖို႔ေျပာရင္း သူမအေနနဲ႔လည္း ရင္ကြဲမတတ္ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနရတဲ့အေၾကာင္းေလးကိုလည္း နန္းဆုေလးက ယူႀကဳံးမရစြာေျပာျပလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။ “ရင္ကြဲမတတ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါတယ္ 😓 ေတာ္ပါေတာ့ လက္နက္မဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနတဲ့ ျပည္သူေတြပါရွင္
လက္နက္အားကိုးနဲ႔ မတရားအႏိုင္က်င့္သတ္ျဖတ္ေနတာေတြ ေတာ္ၾကာ ပါေတာ့ရွင္🙏🙏🙏🙏 အာဏာရွင္စနစ္ မုခ်က်ဆုံးပါေစ HowManyDeadBodyNeedForUNtoTakeAction. .” ဆိုၿပီး နန္းဆုေလးက စိတ္မေကာင္းစြာ ေရးသားထားတာပါ..။ ျပည္သူပရိသတ္ေတြအားလုံး ကလည္း နန္းဆုေလးနဲ႔အတူ ထပ္တူ ခံစားေနရၿပီး မခ်ိတင္ကဲျဖစ္ၾကရတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကို Comment ေလးေတြမွာ အသီးသီးေရးသားထားၾကတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္..။
Previous post နေပူကြီးထဲ မှာတောင် အားမာန် အပြည့် နဲ့ ပါ၀င်လှုပ်ရှားကာ ပြည်သူ တစ်ယောက် အနေ နဲ့ ဆက်တိုက် လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့ ခေးဆက်သွင်
Next post လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ အသက်ပေး လိုက်ရတဲ့ သူရဲကောင်းလေး ရဲ့နောက်ဆုံး အိမ်ပြန်ခရီးကိုကိုယ်တိုင် လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေး ခဲ့တဲ့ ထွန်းကိုကို ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်